Jamaica Waxay Baryaysaa Socotada: Raac Karantiil si loo yareeyo Mu kala duwan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica Waxay Baryaysaa Socotada: Raac Karantiil si loo yareeyo Mu kala duwan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka Portfolio ee Jamaica, Dr. the Hon. Christopher Tufton
Wasiirka Portfolio ee Jamaica, Dr. the Hon. Christopher Tufton, ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo muuqaal ah in 26 ka mid ah 96 muunadood oo ay tijaabiyeen ay ku soo celiyeen natiijooyin wax ku ool ah nooca cusub ee COVID-19 Mu.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), 30 -kii Ogosto, ayaa Mu ku taxay Muhiimadda Danaha (VOI), ka dib markii markii ugu horreysay lagu aqoonsaday Columbia.
Cadaadiska cusub ayaa ah VOI shanaad tan iyo bishii Maarso 2020 waxaana tan iyo markii la xaqiijiyay ugu yaraan 39 dal.
Shan kiis ayaa gobol ahaan la xaqiijiyay intii u dhaxaysay July 19 -keedii ilaa 9 -kii Ogosto ee St. Vincent iyo Grenadines.
In kasta oo kala duwanaanshaha Mu uu ka yar yahay 0.1 boqolkiiba kiisaska COVID-19 adduunka oo dhan, baahinta Koonfurta Ameerika ayaa sii kordheysa, oo hadda waxay ka dhigeysaa 39 boqolkiiba kiisaska Kolombiya iyo 13 boqolkiiba Ecuador.
Sababtoo ah ogaanshaha kala duwanaanshaha Mu, socdaalayaasha Jamaica waxaa lagu boorinayaa inay u hoggaansamaan tallaabooyinka karantiil si loo yareeyo faafinta noocyada kala duwan cudurka coronavirus (COVID-19).
Madaxa Sarkaalka Caafimaadka ee Jamaica, Dr. Jacquiline Bisasor-McKenzie, ayaa sheegtay in magacaabista VOI ay tilmaamayso in kala duwanaanshuhu uu leeyahay kala duwanaansho hidde marka la barbar dhigo noocyada kale ee la yaqaan, taasoo keenta caabuqyo wadamo badan ah oo laga yaabo inay khatar ku noqoto caafimaadka dadweynaha.
Waxay tilmaamtay in kasta oo dhammaan fayrasyadu ay sii kordhayaan waqti ka dib oo isbeddelada badankood aysan wax saameyn ah ku lahayn guryaha fayraska, “isbeddelada qaarkood ee SARS-CoV-2 (fayraska keena COVID) waxay horseedaan noocyo kala duwan oo saameyn kara gudbinta fayraska, cudurka darnaanta, iyo waxtarka tallaallada ”.
“Waa arrin walaac leh maxaa yeelay [waxay awood u leedahay] inay ka baxsato isku -dayga jirka ee lagu burburinayo fayraska iyo soo -saarka unugyada difaaca jirka. Mu wuxuu leeyahay isbeddello xaqiijin kara qaar ka mid ah guryahaas, laakiin weli waa la baarayaa, ”ayay xustay.
“Tani sidoo kale waa sababta aan u sii haysan doonno xoogaa xayiraadaha safarka dalalka qaarkood. Marka, waxay xitaa aad muhiim ugu tahay socdaalayaasha inay fahmaan sababta ay tahay inaan u soo rogno tallaabooyin karantiil. Waxay u baahan yihiin inay joogaan guriga si loo yareeyo halista soo -gaadhista oo si habboon loo baaro si aan u qaadno haddii caabuq jiro, ”ayay ku nuuxnuuxsatay.
Dr. Bisasor-McKenzie wuxuu sheegay in Wasaaraddu ay la socon doonto isbeddelka Mu kala duwanaanshaha, xitaa iyada oo diiradda saareysa kala duwanaanshaha Delta, oo weli sii ah culayska ugu badan ee ku jira jasiiradda oo loo qaabeeyey inuu yahay Variant of Concern (VOC) by WHO.
“VOC (waxaa loola jeedaa) in isbeddellada ay dhaceen, waxayna keenayaan gudbinta oo kordhaysa. Waxay leeyihiin awood ay ku dhaliyaan waxoogaa isbeddel ah oo ku saabsan soo bandhigidda cudurrada bukaan -socodka taasna way sameynayaan, ”ayay tilmaantay.
Dhanka kale, Dr. Tufton wuxuu ku boorriyay dadka reer Jamaica inaysan argagaxin sababta oo ah joogitaanka noocyadan cusub. Wuxuu sheegay in culeyska Mu la maareyn doono marka la raaco hab -raaca caafimaadka dadweynaha ee la aasaasay.
“Culayskan cusubi ma horseedi doono in dad badani dhintaan ama xanuunsadaan. Wali waannu baranaynaa, in kasta oo ay waajib naga saaran tahay inaan ku dhawaaqno, kuma dhawaaqinno inaad argagaxdo… waa inaad ogaato; ma aha fashil nidaamka ama hannaanka, ”ayuu tilmaamay.
Wuxuu ku dhawaaqay in mashiinka Sequencing Genome si loo tijaabiyo noocyo cusub oo COVID-19 ah la filayo inuu yimaado jasiiradda labada illaa saddexda toddobaad ee soo socda.
Wuxuu sheegay in la wareegistu ay ka dhigan tahay inaysan Wasaaraddu u dirin muunado si loogu tijaabiyo dibadda.
Wasaaraddu waxay sii wadaysaa inay ku booriso dadka reer Jamaica inay sida ugu dhakhsaha badan u tallaalaan, iyadoo u hoggaansamaysa hab-raacyada caafimaadka dadweynaha ee lagu taliyay, oo ay ku jiraan fogeynta bulshada, maaskaro-xidhka, iyo fayodhowrka gacmaha.